Vagadziri Vagadziri uye Vatengesi | China Zvigadzirwa Fekitori
Alumina upfu hwakatsetseka hwakagadzirwa kubva kwakaderera sodium calcined alumina powder kuburikidza nekukuya uye kwakadzika kugadzirisa.
Iyo yakagadzirirwa dhizaini yekugezesa inoitwa zvinoenderana nemitemo yehutano nekuchengetedza inoshandiswa muzvirimwa zvemutengesi maererano nekusimba kwesimbi yesimbi, zvivakwa zvezvinhu zvinokanganisa uye nesimbi yesimbi. Semuenzaniso, iyo simbi yekuyerera inomhanya, kudzvanyirira abrasion uye kupisa kwemukati kweiyo lining.
Parizvino, kudiwa kwemusika weakakwira-giredhi aruminiyamu chiwanikwa chiri kuwedzera, uye vatengi vekupedzisira vane zvakakwirira uye zvepamusoro zvinodiwa pahunhu. Kazhinji kutaura, rudzi urwu rwekuda kweakakwira-giredhi aruminiyamu chiwanikwa chiri kusimukira chakanangana nemabatiro eetete-rakakomberedzwa, yakasimba-simba, nyore kugadzirisa. Uku kudiwa kwekutanga-kukanda aruminiyamu chiwanikwa hutsanana kuri kuramba kuchida.
Iko kumwe kuyerera kweiyo inert gasi (nitrogen kana argon) kana yakavhenganiswa gasi (argon-chlorine kana nitrogen-klorini gasi muviri) mune iyo yakaumbwa aluminium, kuburikidza neanotenderera rotor kana pombi yegasi mune iyo yakanyungudutswa aluminium kuita madiki matema, uye zvakafanana akaparadzaniswa ari mvura aruminiyamu. Hydrogen mualuminium yakanyungudika inogara ichipararira mumhepo inoputika gasi, uye sezvo mabhuru egasi achikwira kumusoro kwealuminium yakanyungudutswa, chinangwa chekubvisa hydrogen uye slag chinoitwa.